Ugwu ọkụ na North America | Akụkọ Njem
Volcanoes na North America
Mariela Carril | | America, Canada, Ebe njegharị, United States, Mexico, Oge ntụrụndụ
Volcanoes bụ ihe akaebe na ụwa anyị dị ndụ ma. Anwụrụ ọkụ, magma, lava, gas na ugwu mgbawa na-apụta site na oghere ndị a dị na ala ụwa, site na obi ụwa. Enwere ugwu na-ere ere, e nwere ugwu na-agbọpụ ọkụ, nweekwa ugwu na-agba agba. Mmadu agbaala ugwu mmuo ugwu ma ha amata ka esi akpata oke mbibi.
Ọ bụrụ na ị tụlee etu ha si emebi, ị gaghị aghọta etu enwere ike isi nwee ndị bi n’akụkụ ugwu na-agbọpụ ọkụ, mana ọ bụ otu ahụ ka ọ dị. E nwere obodo niile ewuru n’okwute ugwu mgbawa ndị ka na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ha akpatawo ọdachi n’obodo ndị nwere nanị narị narị mmadụ bi na ya, gịnị ka ha pụrụ ịkpata n’obodo oge a? Na North America enwere ugwu ugwu: na Canada enwere 21 na United States enwere 169, 55 n'ime ha na-enyocha anya, ebe na Mexico enwere 42.
Eziokwu bụ na enwere otutu ugwu mgbawa na North America na ọtụtụ na-arụsi ọrụ ike ọ bụ ezie na ha agbapụbeghị ma ọ dịkarịa ala otu narị afọ na ọkara. Ọ bụ ya mere na ị naghị anụ ọtụtụ ihe gbasara ugwu ugwu ugwu America. Chee echiche na na narị afọ nke iri abụọ naanị abụọ gbara: Lassen na 1915 na St. Helens na 1980. Okwesiri ikwu na ọtụtụ ugwu ọkụ dị n'akụkụ a nke America dị n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ, na efere Pacific na-eme mkpatụ ebe ọ dị na-aga n'okpuru kọntinent kọntinent kọntinent.
1 Volcanoes na United States
2 Volcanoes na Canada
3 Volcanoes na Mexico
Volcanoes na United States
N'ime ugwu ọkụ 169 na-arụsi ọrụ ike nke United States nwere, enwere 55 nke a hụrụ na 18 elere anya "ịkpachara anya" ma ọ bụ n'ihi na ha nwere ike ibute, kpatara ala ọma jijiji ma ọ bụ metụta ndụ ọtụtụ ndị gbara ha gburugburu. Alaska nwekwara ọtụtụ ugwu mgbawa, ọtụtụ n’ime ha dịkwa na Aleutian Islands. Otu n’ime ha, bụ́ Ugwu Akutan, gbara lava na ntụ ọnwa atọ n’afọ 1992. Ka oge na-aga, n’afọ 2005, ala ọma jijiji mere n’ugwu ugwu nke Augustine na mgbawa mgbawa dị kilomita itoolu n’elu. Ọzọ nke ugwu ugwu na-agbọ ọkụ nke Alaska bụ Makushin, n'otu agwaetiti ahụ: ọ gbawara ugboro 34 n'ime afọ 250, nke ikpeazụ na 1995.
Ga n'ihu na Alaska bụ Mount Redoubt, nke na-arụ ọrụ na 2009 ma mee ka ọdụ ụgbọ elu Anchorage mechie maka awa 20. Oke ugwu kachasi elu na Aleutian Islands bụ Ugwu Spurr, nke kpuchiri Anchorage na ntụ na 1992 n'agbanyeghị na ọ dị jụụ n'oge ahụ. Igwe ọkụ Lassen Peak gbawara na ọkụ ọkụ na 1915 na ntụ na-asa ruo Nevada. N’ebe dị anya site na Alaska, enwere ugwu ugwu ndị ọzọ dị na California: Long Valley Caldera na-egwu egwu kemgbe afọ ‘90s’ yabụ n’oge ọbụla i hiri ụra ma ọ bụ teta. Ugwu ugwu Californian ọzọ bụ Ugwu Shasta, mana ebe ọ bụ na ngwụcha narị afọ nke XNUMX ka emeela nke ọma.
Na Oregon enwere ugwu mgbawa ndị ọzọ nke hiri ụra ma ụfọdụ n'ime ha akpụpụtala agbụ nke akpọrọ Chain Ekwensu. Na steeti Washington enwere ugwu ọkụ: e nwere Ugwu Baker, echekwara ya nke ọma ebe ọ bụ na ọ hụrụ magna na 1975. ugwu mgbawa ọzọ dị nso bụ Glacier Peak, Ugwu Rainier na nke kachasị ewu ewu na otu n’ime ugwu ugwu ndị ama ama n’ụwa, Santa Helena. Ugwu a gbawara na 1980 wee gbuo mmadụ 57.
N'ikpeazụ, ọ gaghị ekwe omume ikwu maka ugwu ugwu ugwu America na ugwu ugwu Amerika ọkachasị na-agụghị aha Ugwu mgbawa nke Hawaii. Ugwu ugwu Kilauea nọ na-agbawa agbawa ruo afọ iri atọ ma bụrụ ihe egwu oge niile. Mauna Loa bụ olu ụda olu kachasịnụ n'ụwa, gbawara na 1984 ma na-enwe ọrụ dị egwu ugbu a.
Volcanoes na Canada
Canada nwere ugwu mgbawa n'ọtụtụ mpaghara ya: na Alberta, British Columbia, Labrador Peninsula, Northwest Territories, Ontario, Nunavut, Quebec, Yukon na Saskaychewan. Ha dị ihe dị ka 21 na n'etiti anyị anyị nwere ike ịkpọ Fort Selkirk, Atlin, Tuya, Heart Peaks, Edziza, Hoodoo Mountain na Nazko, dịka ọmụmaatụ.
Fort Selkirk bụ ugwu mgbawa ọhụụ ọhụrụ dị na etiti Yukon. Ọ bụ nnukwu ndagwurugwu nke etolitere na nkwụsị nke mmejọ abụọ. Ọgba aghara na-aga n'ihu akpụzi cones ise. Atlin bụ ugwu ugwu ọzọ na-eto eto mana na British Columbia. Taa cone kachasị elu dị mita 1800. Tuya di n’ugwu Cassiar, n’ebe ugwu nke otu mpaghara ahu, site na Ice Age. Heart Peaks nke ugwu atọ kachasị ukwuu na mpaghara Canada a na-ewu ewu maka ugwu ugwu ya, na agbanyeghị na ọ pụtabeghị kemgbe oge ice ikpeazụ, ọ mara mma.
Edziza bụ nnukwu stratovolcano nke na-akpụ kemgbe otu nde afọ. O nwere akuku ice di kilomita 2 na obosara ya na egwu nke mmeghari ya. Ugwu Hoodoo dị n’akụkụ ugwu nke Osimiri Iskut, n’otu ógbè ahụ. E hibere ya na Ice Age ma o nwere okpu ice n’etiti n’agbata kilomita atọ na anọ n’ogologo, n’elu, n’ogologo nke mita 1750. N'ihi ya, ọ na-abụ glaciers abụọ. N'ikpeazụ, Nazko: ọ bụ obere ugwu mgbawa, nwere cone nke atọ fumaroles, dịkwa na British Columbia, na etiti mpaghara mpaghara ahụ yana ihe dịka 75 kilomita site na Quesnel. Dị ka ndị ọkà mmụta sayensị si kwuo, ọ pụtaghị na 5220 afọ.
Ndị a abụghị naanị ugwu mgbawa na Canada, mana ọ bara uru ịlele mara na e nwere ọtụtụ na nke ahụ ọtụtụ ugwu ugwu Canada dị na British Columbia.
Volcanoes na Mexico
Ugwu ugwu na Mexico na-etinye uche na Baja California, northwest nke mba ahụ, agwaetiti, ọdịda anyanwụ, etiti na ndịda. Enwere ngụkọta nke ugwu ugwu 42 na Mexico ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha nile dị n’ebe a na-akpọ Pacific Ring of Fire. Ihe ọkụ ọkụ na-arụsi ọrụ ike bụ Colima, El Chichón na Popicatepetl. Dị ka ihe atụ, mgbe El Chichón, na Chiapas, tiwapụrụ na 1982, o mere ka ihu igwe dị jụụ n’afọ sochirinụ, e weere ya dị ka ọdachi mgbawa kasị mkpa n’akụkọ ihe mere eme Mexico n’oge a.
Ugwu mgbawa Colima ma ọ bụ Volcán de Fuego so n’otu ugwu mgbawa nke mejupụtara ugwu mgbawa ahụ, Nevado de Colima na nke ọzọ akpọrọ akpọrọ El Cántaro, kpochapụrụ. Onye nke ọdụdụ n’ime mmadụ atọ a na-ahụta ugwu dị egwu na Mexico na North America niile, ebe ọ gbawara ugboro iri anọ kemgbe ngwụcha narị afọ nke iri na asaa. Ọ bụ ya mere a na-eji enyocha elekere iri abụọ na anọ n’ụbọchị.
Dị ka anyị na-ahụ, North America nwere ọtụtụ ugwu mgbawa ọ bụ ezie na ha abụghị akụkọ kwa ụbọchị maka ihe, ndị sayensị nke ọ bụla n'ime obodo atọ ndị a nwere ọtụtụ nyocha. Mgbawa ugwu mgbawa dị ịtụnanya, ọ bụ ụwa dị ndụ na ngosipụta ya niile, mana taa, ebe ọtụtụ mmadụ bi n'ụwa, mgbawa nke dị oke ukwuu nwere ike ibute ọtụtụ nsogbu na mmebi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Canada » Volcanoes na North America
ukwuu salami jeere m ozi naaa mentrira ọ naghị efe m ọrịa, ị ga-anwụ na-arịa ọrịa
Nke a bara uru n'ihi na ị na-eme mkpesa, umengwụ, na-arụ ọrụ ụlọ akwụkwọ gị, dọọ ya !, ma ọ bụrụ na ọ masịghị gị, chọọ peeji ndị ọzọ, akatọla, ọ na-emere gị ihe dị mma, ỌMA JOB !!
Zaghachi ka elissa
Maapụ dị mkpa maka ebe ọ dị, n'ihi na ọ bụghị ọmụmụ maka naanị ụmụ akwụkwọ US
ee ee e, ụmụ akwụkwọ ahụ, LATIN AMERICA jikwa ya
Gaa n'okporo ụzọ Ebro
Ugwu Northern, gịnị ka ha bụ na ebe anyị nwere ike ịhụ ha?